Bogagga ugufiican ee laga daawado filimada khadka tooska ah LACAG LA'AAN War gadget
Aadida shaleemada waa mid aad ufiican: nalalka oo dansan, shaashad weyn, codka hareeraha, tayada oo aad uqurux badan iyo dadka hadii ay yihiin filim cabsi leh, naga caawiya inaan noqono kuwa kacsan. Laakiin, markaad runta sheegto, filimada oo dhami uma qalmaan safarka iyo lacagta ku baxaysa, markaa waxa ugu fiican waxay noqon kartaa in lagu daawado guriga, shaashadda kombuyuutarkayaga (oo ku xidhan telefishanka qolka fadhiga ayaa ka fiicnaan doona) iyo goorta aannu dareensii iyada oo aan loo eegin jadwalka. Iyada oo tan dambe maskaxda lagu hayo, waxaan dooneynay inaan ku siino bogag taxane ah oo noo oggolaan doona inaan aragno filimada khadka tooska ah bilaash ah.
Laga soo bilaabo liistada soo socota, amarka macno malahan. Kaliya waxaan dhigay websaydhka ugu horeeya ee aan aadka u isticmaalo, laakiin waxaan kaliya u sameeyaa maxaa yeelay waxay ii ogolaaneysaa inaan xakameeyo wax kasta oo aan doonayo inaan arko, arko ama taxanaha aan raacayo. Sidoo kale, waxaan u maleynayaa inay tahay websaydhka ugu fiican bulshada ee nooceeda ah waana la tiriyaa sidoo kale. In kasta oo ay jiraan degello kale oo laga daawado filimada khadka tooska ah ee iyaguna qaybtooda bulsheed leh, maaddaama aan arki karno waxyaabaha ku jira diiwaangelin la'aan, waxaan doorbidnay in aan isdiiwaangalin, wax aan ka dhicin Pordede. Waxaan kaaga tagay liiska.
1 Halkee laga daawan karaa filimada internetka?
1.4 Wadarta Filimada
1.8 Filimada Fox
1.14 Sii deynta
2 Faa'iidooyinka filimada geeyo
3 Qasaarooyinka daawashada filimada khadka tooska ah
Halkee laga daawan karaa filimada internetka?
Markii caanka ahaa Taxane ah bilaabay inuu dhaco, inbadan oo naga mid ah ayaa bilaabay raadso waxyaabo kale iyo isticmaaleyaal badan ayaa soo maray Pordede. Magaca ayaa ka yimid POR DEscarga Directa, oo ah goob ay ku xiraan xiriiriyeyaasha filimaanta geeyo. Farqiga u dhexeeya Pordede iyo Pordescargadirecta iyo waxa inaga dhigay inaan noqono boggeena ugu xiisaha badan marka taxanaha la xiro ayaa ah inaan la socon karno taxanaha aan jecel nahay, iyo sidoo kale inaan xakameyno filimada aan aragnay, ee aan dooneyno inaan aragno, kuwa aan ugu jecel nahay iyo xitaa faallo ka bixi oo arag waxa adeegsadayaasha kale ay ka qabaan filim, silsilad ama dhacdo taxane ah.
La qaybta bulshada de Pordede, sidii ay ahayd maalinteedii taxanaha, waa maxay, feker ahaanteyda, ka dhigeysaa isticmaalayaasha inay sii joogaan Pordede.
Cusboonaysiinta: Pordede mar hore ayuu dhacay oo wuxuu noqday Plusdede, oo isna xidhay, laakiin waa kuwan beddelkayada loo yaqaan 'Plusdede', oo ah soo uruurinta bogag isku mid ah.
Pelis24 sidoo kale waxaan ku leenahay aflaam badan oo dhakhso leh, laakiin waxay leedahay qodob kale oo wanaagsan oo aan indhaha laga qarsan karin: waan arki karnaa filimada adigoon ka bixin shabakada. Waa run in xiriiriyeyaasha qaarkood u baahan yihiin Flash Player, laakiin xulashada ikhtiyaar iyo ka daawashada bogga websaydhku waa mid aan qiimo lahayn. Sida adeeg kasta oo martigelin fiidiyoow ah, waxaan ku daawan karnaa filimada shaashad buuxda. Way fiicantahay.
PelisDanko wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee aan la kulmo markii aan arkay in Mushkiladaha ay si taxaddar leh u shaaciyeen, haddana mar labaad ayaan magacaabayaa maxaa yeelay waxay ahayd tixraaca bogga noocan ah. Dhab ahaantii, waxa ugu horreeya ee aan helay wuxuu ahaa SeriesDanko halkaasna waxaan ku arkay dhacdooyin taxane ah sida The Walking Dead ama Better Call Saul. Hayso xiriiriyeyaal badan filim kasta iyo dhowr luqadood (Laatiin, Isbaanish, asal, subtitled sub). Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo mudan in lagu helo waxyaabaha aan jecel nahay.
Sida loo daawado filimada hadda jira gabi ahaanba bilaash Isbaanishka
Isla wixii aan ka idhi PelisDanko, waxay iila shaqaysaa Total Filim. Xilligaas oo hubanti la'aan ah, oo aan raadinayo waxyaabo kale, ayaan la kulmay Wadarta Taxanaha, oo waliba leh qayb filim ah. Waxa kale oo ay leedahay xiriiriyeyaal badan oo filim / cutub kasta ah iyo Isbaanish, Laatiin, cinwaan hoose iyo nooc asal ah
Downloadsmix waa bog aan ogaa xitaa kahor sharciga oo qasbay xiritaanka bogag badan oo web ah oo na siiyay xiriiro aan ku daawan karno filimada qulqulka. Markii hore waxay ahayd downloadsmix.net iyo sidoo kale waxay ku dhowdahay in la xiro, laakiin way kaceen oo hadda, marka lagu daro bixinta tooska ah ee soo degsashada, waxay sidoo kale bixiyaan xiriiriyeyaal si ay u daawadaan waxa ku jira qulqulka.
Downloadsmix waxay leedahay filimo badan (oo kaliya maahan filimada) iyo, waliba, badanaa ku dar wax kale ma dhacaan hordhac. Sida iska cad, inta badan waqtiga waxay bilaabaan inay ku baxaan "TS-Screener" tayada laakiin, munaasabada ugu yar, waxaan ku haynaa DVD-Screener ama BR-Screener. Waxay kaloo ku daraan filimo HD ah.
Tekilaz maahan websaydh muuqaal soo jiidasho leh umana muuqdo mid caqli gal ah, laakiin taasi maahan waxa na xiiseynaya. Waxa na daneynaya ayaa ah ku dar horudhac dhowaan waana awoodnaa sidoo kale ka arag isla webka, taas oo aad ufiican. Sida Pelis24 oo kale, filimada shaashad buuxda ayaan dhigi karnaa markii aan ciyaarno. Degel kale oo laga fiirsado.
Waxaan ku sii wadaynaa Peliculasmas, degel kale oo la mid ah Tekilaz oo aan umuuqan kuwa ugu caqliga badan adduunka, laakiin waxay si dhakhso leh u kordhisaa sii deynta cusub isla markaana waxaan sidoo kale daawan karnaa filimka adigoon ka tagin shabakada, taas oo aad ugu raaxeysaneysa. Haddii aad rabto inaad aragto horudhacyada, waa inaad gujisaa oo keliya meesha ay ku qoran tahay "Filimnada Soo-baxa ee 2015" (ama sanadka aad rabto)
Haddii waxa aad rabto ay yihiin bog deg deg ah, Peliculasfox ayaa laga yaabaa inay adiga xiiseyso. Haddii aan ku rakibnay Flash Player, waan arki karnaa filimada saddex ama afar guji, macno ahaan, illaa iyo inta filimka aan dooneyno inaan aragno uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya. Waxaan doorannaa sanadka, waxaan doorannaa filim waana ciyaareynaa. Ka fudud, aan macquul ahayn.
Waxaan ku sii wadaynaa xawaaraha aan ku daawanayno filimada dhowr guji oo waxaan tagnaa shabakada Tvpelis. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku rakibto Flash Player, laakiin xoogaa qasabno ah ayaan daawan doonnaa filimka aan dooneyno, illaa inta uu ku jiro buuggaaga. Markii la arkay waxa ay hayaan, waxay umuuqataa taas sidoo kale waxay ku darayaan horudhaca dhowaan. Way mudan tahay in lagu helo waxyaabaha aan ugu jecel nahay, shaki la'aan.
Waxaan ku sii wadaynaa xawaaraha, laakiin waxaan yareynay raaxada xoogaa. Nolomires waxaan sidoo kale ka daawan karnaa filimo dhowr guji, laakiin ma lahan qaybo, kaliya raadiya waana taas sababta aan u iri waa ka raaxo yar tahay. Sikastaba, waxaan arkay aflaam aan horay loo sii deynin, marka sidoo kale waa mudan tahay in laga fiirsado.
In kasta oo magaceeda aan si cad u aqrin karno HD-ga buuxa, had iyo jeer run ma ahan, macquul ahaan. Waxay leeyihiin liis garayn wanaagsan oo filimo ah (iyo waxyaabo dheeraad ah) waxayna u muuqdaan inay si dhakhso leh ugu darayaan xiriiriyeyaal. Sida degel kasta oo wanaagsan oo noocan ah, waxaa jira ikhtiyaar aad ku aragtid VOS, Isbaanish iyo Laatiin.
SerieDB waa bog kale oo weyn in kastoo magaceeda aan ku aragno ereyga "taxane", waxay kaloo leedahay filimo ay ku daawan karaan qulqulka. Waxay kudarsadaan xiriiro badan oo dhaqsa leh, laakiin waxaad ubaahantahay inaad yeelato rakibay Flash Player (iyo laga yaabee Java) si loo furo xiriiriyeyaasha qaarkood. Waxaan ku darsaday liiskan maxaa yeelay waa la ila taliyay oo waxaan ku hayaa kuwa ugu cadcad, laakiin wali ma aanan awoodin inaan wax arko (Flash iyo Java ma isticmaalo).
Gnula waa bog sida, kuwa kale oo badan, aan ku leenahay filimo badan (iyo taxane). Waxa aniga gaarka iga dhigay ayaa ah in badan oo ka mid ah kuwii ugu dambeeyay filimada argagaxa Waxaan arkay inay ku jiraan qoraalka boggooda mar uun. Waxaan u imid inaan arko filimo tayo aad u weyn leh isla marka la sii daayo. Dabcan, oo leh subtitles Shiinaha. Si kastaba xaalku ha ahaadee, subtitles waa shar ka yar, maadaama aan waligey arkaayey maxaa yeelay runtii waxaan doonayey inaan arko filimka laga hadlayo; waa qiimo mudan in la bixiyo.
EstrenosGo waa degel igula taliyay walal daawado shineemo badan. Markii hore, waxaan u maleynay inaan lagu dari karin liiskan laakiin, daalacashada shabakada xoogaa iyo inkasta oo aan si cad u aqrin karno "shabakada soo degsashada", waxaan xaqiijinay inay sidoo kale jiraan xiriiriyeyaal si loo arko filimada socda, taas oo ah waxa waxaan xiiseyneynaa liiskan.
Sida magacoodu sheegayo, waxay ku daraan xiriiriyeyaal sii daayo quruxsan ugu dhakhsaha badan, sidaas darteed waa wax xiiso leh in lagu sii hayo kuwa ugu cadcad si aan marba mar u fiirinno.
DvixaTope waa degel kale oo walaalkay igula taliyay. In kasta oo laga yaabo inaad maqashay, haddana sidoo kale waa run inay jiraan goobo badan oo ereyga "dvix" uu ku jiro taariikhda bogagga soo degsashada. Si kastaba ha noqotee, waxa noo muhiim ah waa waxa ay hadda na siiyaan iyo DvixaTope waxay leedahay liis garayn ballaadhan oo filimo ah, laakiin sidoo kale de taxane, ciyaaro, softiweer, muusig iyo waxyaabo kale. Shaki la'aan, waa mudan tahay in la keydiyo. Markasta oo ay sii badato.
Newpct waa gantaal duug ah. Kahor intaan la abuurin Newpct1, waxay horey u soo rarnaayeen durdurro si ay u soo degsadaan filimada muddo dheer haddana waxay sidoo kale leeyihiin degel aan ka sii deyn karno. In kasta oo taariikhdooda si wanaagsan uga hadlayso oo ay leeyihiin aflaam badan oo la heli karo, waa in taas loo aqoonsadaa Maaha mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee lagu daro horudhaca, laakiin marwalba way mudan tahay in qolka jiifka la seexdo haddii ay dhacdo, sabab kasta ha noqotee, xulashooyinkayaga kale ayaa noo fashilmaya.
Faa'iidooyinka filimada geeyo
Waan arki karnaa filimada aan soo dejisan. Tani waxay ka dhigan tahay inaan arki karno iyaga oo aan ka welwelin inta boos ee noo harsan, maadaama aan soo degsan doonno xoogaa megabeyt ah oo faylal ku meel gaar ah ah oo la tirtiri doono markaan aragno.
Looma baahna beddelaad. Mararka qaarkood markaan filim soo dajisanno kuma habboonayn aaladda la bartilmaameedsanayo, sida telefishinnada qaarkood ee leh USB. Haddii aan ku aragno biraawsarka, tani dhib ma leh.
Degdeg ah. Filimka aan helno, waxaan ku haynaa dhowr guji oo dheeri ah.
Qasaarooyinka daawashada filimada khadka tooska ah
Sawirka iyo tayada codku aad uma fiicna. Mararka qaar waxaan heli karnaa filimo tayo wanaagsan leh, laakiin ma ahan kuwa ugu caansan. Ku soo degsashada waqtiga dhabta ah, waxay u badan tahay in, oo leh xiriir gaabis ah, lagu arki doono tayo ka sii xun. Weligeen ma sii dayn doonno filim leh tayo isku mid ah sidii aan ku soo dejisannay HD.
Xayeysiinta xad dhaafka ah. Websaydhada martigeliya noocyada fiidiyowyada ayaa ka buuxa xayeysiis. Mararka qaar, tanina waa run, waxaan rabaa inaan daawado anime (Dragon Ball Super) iyo, inta aan sugayo inaan arko iskuxirka, waxaan kujiraa bog ay ka buuxaan xayeysiisyo xunxun. Caqli gal: sawir gacmeedyo loogu talagalay dhagaystayaasha oo dhan = porno. Xitaa markaan ku jirno bogga si aan u aragno filimka, waxay u badan tahay in xayeysiintu ay ka muuqato hoosta, wax aan ka saarnay si fudud shaashad buuxda.
Mararka qaarkood waa inaan raadi wax ka badan koontada. Haddii filim duug ah, mid aad u cusub ama aan caan ahayn, deg-degga ayay u badan tahay inuu baaba'o. Waxaa laga yaabaa inaan raadino degello badan oo isku dayno xiriiriyeyaal badan si aan u daawano filim. Taasi waa sababta liiskan ugu soo bandhignay fursado badan 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Burcadbadeednimada » Goobaha ugufiican ee laga daawado filimada khadka tooska ah bilaash
Koodh diiwaangelin kasta oo loo baahdo fadlan? !!!
Taxanaha Pordede dijo
Kordhi kuwa ugu fiican, shaki la'aan 🙂
Waxaan u arkaa in barxada ugu wanaagsan ee webka bilaashka ah ee waqtigan xaadirka ahi ay tahay plusdede, tan iyo dhicitaankii pordede ma jirto cid kale oo ugusoo dhowaanaysa, uguyaraan waa midka leh taxanaha iyo filimada ugu badan.
Isbaanishka ayaa hogaamiya lacagaha "lala xiriirin" ee xilliyada lacagaha mobilada lagu bixiyo
Wolder-ka Spain ayaa ku dhacay dhibaatada taleefanka gacanta